I-villa yoMyili wezakhiwo eshushu yokuqubha l ile rousse - I-Airbnb
I-villa yoMyili wezakhiwo eshushu yokuqubha l ile rousse
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMartine
I-villa yoyilo lwe-Ultra, eqaqambileyo, enomoya opholileyo kunye nemibono ye-panoramic yolwandle, i-Ile Rousse, i-Cape Corsica kunye neentaba ze-Corbara.
Iimitha ezingama-200 ukusuka kumanxweme anesanti yomkhosi wenqanawa. Idama lokuqubha (4Mx8M), lishushu, likhuselekile. Igadi evaliweyo yeMeditera ehonjiswe ngegadi ephangaleleyo, ivillage ephangaleleyo yobutofotofo obukhulu engqongwe ngamathafa amakhulu etiak (175M2) efakwe iigadi ezomileyo. Indawo yokuhlala kunye nezolile i-davia marine.
"Siza kuba nendlu eneefestile ezininzi kwaye akukho naludonga kwaye siya kuhlala kuyo kwaye kuya kuba kuhle ukuba lapho .."
Indlu enendawo yokuphola ephucukileyo yale mihla, enemihombiso etofotofo, enika ukukhanya nobuhle bewebhsayithi.
I-air-conditioned ngokupheleleyo okanye ifudumele, i-villa inamagumbi aliqela kwaye itofotofo kakhulu (i-wifi, i-intanethi, i-TV)
Ijikelezwe ziindawo ezinkulu zeti (175 m2) ezinemiboniso eyi-3, ukubonelela ngeegadi zoyilo ezomileyo kunye neentyatyambo ezintle kakhulu zokonwabela ulwandle kunye neentaba
Zonke iindawo zamatye, ipuli yokuqubha, igadi zinokukukhanyisela de kufike ubusuku
Amatye akumgangatho ayi-2 kumgangatho osezantsi nakumgangatho wepuli kwaye anefenitshala eyaneleyo kunye nefenitshala yepuli.
Igumbi lokuhlala eliyi-50 m2 , iimitha eziyi-6 ukuphakama, unquphantsi wokwenyani wokukhanya, umphantsi wefestile yesilingi uvula kakhulu ngeefestile ezinkulu ezisilayidayo ukuya kumatye anendawo enkulu nekhanyayo.
Le ndlu yenzelwe ukuba ibe ziindawo zangaphakathi nangaphandle ukuze zidityaniswe nendalo yaseCorsican.
Ikhitshi lale mihla, elinento yonke, elinendawo yokugcina izitya (umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa iimpahla, ioveni, isitovu esisebenza nge-induction esiyi-2 kuquka ne-1 yaseMerika ...i-microwave...)
Kumgangatho osezantsi :
inombolo yegumbi lokulala 1 (ibhedi elala abantu ababini 180) kunye nefestile evulekileyo kwintente enendawo yokuhlambela (ishawa yaseItaly, indlu yangasese)
I-mezanine enesofa nendawo entle yokubuka ulwandle , isiqithi esibomvu, iintaba kunye neCorsican cape ngamanye amaxesha.
Amagumbi okulala ayi-2 aquka i- # 2 anebhedi elala abantu ababini eyi-160 ne # 3 eneebhedi ezilala umntu omnye eziyi-2 eziyi-90
Amagumbi okulala ayi-2 abona ulwandle kunye neentaba.
Igumbi lokuhlambela eliphakathi kumagumbi okulala ayi-2, elinesitshixo esiqinileyo neshawa nendlu yangasese.
Inqanaba lephuli: Igumbi lokulala elingu-4 elinendawo yokungena engaphandle enefestile engaselunxwemeni evulekileyo kwindawo ephakamileyo nepuli
eneebhedi ezimbini ezilala umntu omnye eziyi-90 negumbi lokuhlambela elineshawa enkulu yaseItali kunye nendlu yangasese
Igumbi lokulala elingu-5 elinokungena kuphela ngaphandle elinefestile evulekileyo kwindawo ephakamileyo nepuli enebhedi eyi-1 ye-160 negumbi lokuhlambela elineshawa enkulu yaseItali, indlu yangasese nebhafu.
Ipuli yokuqubha: ithala elisezantsi
(4 m×8 m ubunzulu 1.50 m)
Izitepsi ezinamanzi ashushu,
zikhuselekile (ialam xa kukho abantwana kodwa isusiwe xa kukho umoya negeyithi ezinokuvala indawo yokungena kwipuli phezulu uze uyigcine ngokusisigxina), Ayinakwa
Kukho ishawa ephandle enamanzi ashushu.
ikhitshi elincinci langaphandle elinendawo yokoja kufuphi nepuli .
Igumbi elincinci elinomgangatho wepuli lokuqubha nelokugcina ulwandle kunye nemidlalo yabantwana.
Ifenitshala yepuli, iindawo ezipheleleyo: indawo yokuphumla yangaphandle
iitafile ,izitulo, izitulo eziphezulu, ii-sun lounger, iambrela, imidlalo yaselwandle yabantwana...)
Igadi yeMeditera, indawo entle, ebiyelwe ngeendawo ezizolileyo neziphuma iintyantyambo (imithi yomnquma, imithi ye-alimondi, imithi yamakhiwane...) ilungele ukuphumla kwi-hammock ethe cwaka kunye nomthunzi weentende.
Indawo yokupaka yabucala iimoto eziyi-4 ukuya kweziyi-5 phambi kwendlu enendawo yokuphola ye-wifi enesantya esiphezulu
I-navia yindawo yokuhlala, enamahlathi amaninzi, ethe cwaka, ekwiikhilomitha eziyi-20 ukusuka eCalvi, ekwiikhilomitha eziyi-4 ukusuka kwiRed Island apho kukho iivenkile ezininzi kunye neziko leevenkile zeLeclerc ezikumgama weekhilomitha eziyi-3 kunye namanyathelo emveliso yengingqi,
Imizuzu eyi-5 ukusuka kwiilali ezintle eziqhelekileyo ze-corwagen, i-pigna, i-st antonino, i-monicello...
I-navia inamalwandle amahle ayi-4 anesanti, enye yayo ikude ngeemitha eziyi-200, imizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwipomakazi kunye nenye enkulu enevenkile yokutyela entle
Intenetya ikude ngeemitha eziyi-300, ukukhwela ihashe nebala legalufu ikumgama weekhilomitha eziyi-6
isikhululo sikaloliwe esincinci samalwandle (iCalvi l 'île rousse bastia) siselwandle kangangemizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwipomakazi lendlu.
I-La Balagne yenye yezona ndawo zintle zaseCorsica kunye neelali zayo eziqhelekileyo zeentaba ezijonge ulwandle kunye nolwandle lwayo oluhle, ndingasathethi ke ngokupholisa kwemilambo yayo.
Ijuwelari yokwenene yaseCorsica kunye nethuba lokunyuka intaba okumnandi kakhulu.
Uninzi lolwandle , umhlaba, umlambo kunye nemidlalo yangaphandle ziyafumaneka.
Ngaphandle kokukhankanya ezi venkile zokutyela ezintle neziqhelekileyo zamalwandle kunye neelali endiza kukunika zona (iivenkile zokutyela kodwa kwakhona ukupheka, ukutya, abantwana, umqeqeshi wokuqubha wabantwana...)
Umamkeli wakho uhlala imizuzu emi-5 ukusuka kumkhosi wenqanawa wasedavia
iinkcazo zokusebenza ngokufanelekileyo kwevilla ekufikeni kwakho
Iselfowuni yam ihlala ivuliwe ngexesha lokuhlala kwakho
Ukufika kunokuququzelelwa kwaye kuguquguquke ngokufikelela kwizitshixo kwibhokisi eliphambili
Iselfowuni yam ihlala ivuliwe ng…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$2626
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corbara